Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Encane Eyingqayizivele E-Adirondacks Enhle - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Encane Eyingqayizivele E-Adirondacks Enhle
Whitehall, New York, i-United States
Indlu encane ibungazwe ngu-Angela
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Angela izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Phumula kule ndlu eyakhiwe ngamapulangwe enhle etholakala e-Historic Village of Whitehall. Indawo yokuzalwa yase-US Vuka uqabulekile futhi ulungele usuku lokuhlola i-Adirondack kule ndlu eyakhiwe ngamapulangwe ehlanzekile, eyingqayizivele enomoya wokwamukela izivakashi ohlaba umxhwele. Lena indawo enhle yokuphumula ngemva kosuku olude lokuqwala izintaba, ukutshuza eqhweni, ukushushuluza eqhweni, noma ukuhlola indawo. Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe inikeza okokuzithokozisa kokukhempa okuhamba phambili. Phuma futhi uzulazule emzileni odumile oseduze we-Black Mountain futhi ubheke i-Sasquatch!
Ingabe uyakuthanda ukuba ngaphandle kodwa awuqiniseki ngokuphelele ukuthi ukukhempa etendeni kungokwakho? Empeleni, noma ngabe yisiphi isizathu sakho, le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe encane eyingqayizivele inikeza ithuba elihle lokubalekela idolobha futhi uhlale uthokomele kakhulu e-Adirondack enhle. Sikunikeza wonke amasevisi adingekayo azokwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo futhi kujabulise. Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe ayigcini nje ngekhishi elincane, kuhlanganise nefriji elincane, isitofu se-propane esiphathekayo, isitofu sikagesi, izitsha nezinto zokupheka. Sikunikeza nezinhlobo ezihloniphekile zezinto zesidlo sasekuseni njengekhofi ne-oatmeal ngethemba lokuthi wena neqembu lakho nizokwazi ukuchitha isikhathi uma ukhohlwe izilokotho zakho. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe iphinde ibe namashidi, amathawula, i-shampoo, i-conditioner, insipho yomzimba, ngisho nezitsha zezinja zabalingani bakho abanoboya. Phumula kalula embhedeni omkhulu onamashidi ahlanzekile nemicamelo ethokomele, kanye ne-pad yomatilasi efudunyeziwe ngalezo zinsuku zasebusika ezibandayo! Ngaphezu kwalokho, le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe inomatilasi ofuthwa ngomoya noma indlwana yabangane abangathanda ukukujoyina ekuzijabuliseni kwakho. Uzoba ne-AC kanye/noma iyunithi yokushisisa. Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe eyingqayizivele ilungele ukupheka umlilo onomgodi womlilo, isango le-grill, itafula lepikiniki nezihlalo. Izinkuni, amalahle, nomlilo kwaqala ukuthengwa. Siphinde sihlinzeke ngama-kayaks amathathu kanye nesikebhe somuntu oyedwa esiqashisayo. * * Ikhishi elincane alinawo usinki futhi indlu yokugeza/igumbi lokuhlanza izingubo cishe yimizuzu embalwa ukusuka endlini yakho eyakhiwe ngamapulangwe futhi kungase kudingeke ukuthi uhambe/ushayele amagumbi okugezela phakathi nezinyanga zasehlobo/zasebusika. I-FYI amashawa anamanzi ashisayo unyaka wonke ;) Amagumbi okugezela awezivakashi zethu ze-Airbnb kuphela. I-Wifi iwumsebenzi oqhubekayo ayiyona engcono kakhulu futhi sizama konke okusemandleni ethu ukuyenza isebenze ngaphandle kwenkinga.
Umbhede omkhulu ongu-1, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, imibhede yomoya engu- 1
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe ise-Whitehall, NY. Kukhona izinhlobo ezinhle kakhulu zemisebenzi yangaphandle. Hlola incwadi yami yeziqondiso!
VT 28mi waseLake George, NY
45mi wase-Saratoga Springs, NY
25mi wase-Ticonderoga, NY
23mi wase-Glens Falls, NY
19mi wase-Queensbury, NY
Shane and I are will be your hosts/guest. We are very hard working young adults who strive for happiness. We are passionate for adventures and the outdoors. Shane is an athlete and I am a traveling professional.
Ngitholakala esivakashini kusukela ngo-9am-9pm ngomyalezo noma mathupha.